Steve Wozniak muhoro paApple iri $ 50 pasvondo | Ndinobva mac
Kunyangwe vazhinji vasingazvizive, Steve Wozniak achiri mushandi weApple, kambani yaakagadzira naSteve Jobs. Kuva mushandi weApple, vazhinji venyu mungafunge kuti muhoro wamunogashira mwedzi wega wega unofanirwa kunge wakanyanya kukwirisa uye / kana kufanana neuyo mamaneja epamusoro ekambani anogona kugamuchira. Zvakanaka, hazvizove.
Podcast yaGuy Kawasaki, Vanhu vasinganzwisisike, yakave nemukana wekuverenga muchikamu chayo chekupedzisira nekuvapo kwaSteve Wozniak, uyo anotsigira izvo siwe muhoro kuApple iri $ 50 mambure vhiki nevhiki, mushure mekubvisa mutero uye hurongwa hwekuchengetedza, muhoro waanoona zviri pachena hauna kunyanya kukwirira.
Wozniak anoti achiri mushandi weApple uye izvo ndiye chete munhu anogamuchira vhiki rega rega Muakaunti yako mari inosvika madhora makumi mashanu, yakaderedzwa mitero yose. Zvinoenderana naWozniak:
Chinhu chidiki, asi ndechekuvimbika, nekuti chii chandingaite icho chakanyanya kukosha muhupenyu hwangu? Hapana ari kuzondidzinga basa. Ini ndinogara ndine manzwiro akasimba eApple.
Kunyangwe mune iyi bvunzurudzo zvingaratidzika sekuti chinonyanya kushamisa mubhadharo waanogamuchira kubva kuApple, hazvina kudaro. Wozniak anoti Steve Jobs aigara achikurudzirwa nemari uye simba uye aigara achitsvaga nzira dzekuzviita hombe izvozvi. Wozniak anoti haana kumbobvira akurudzirwa nemari paakabatana neMabasa kuumba Apple.
Steve aida kuve anokosha, uye aive asina kana mari. Saka aigara achitsvaga diki nzira dzekutora nhanho inotevera, aida kuve iye akakosha munhu muhupenyu. Uye uku kwaive kuzorora kwake kukuru, nekuti iye zvino aive muvambi wekambani mune mari zhinji yakaiswa.
Pakatanga kambani kukura, Hunhu hwaJobs hwakachinja, Handina sokuti Hazviiti zvakare, pachinzvimbo ndaigara ndichida kutaura zvebhizimisi uyekukanganwa zvishoma. Iyo inoshamisa Gentre podcast inowanikwa kubudikidza nechisungo ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Steve Wozniak muhoro paApple iri $ 50 pasvondo
Na2025, Apple TV + ichave iine mamirioni makumi maviri nevatanhatu
"Musoro Pointer" inowanikwa mune nyowani beta yeCatalina: iyo inotora inotevera maziso ako